Wint Phyo's Likes - Myanmar Network
Wint Phyo's Likes
Back to Wint Phyo's Page
အလုပ်ရှာပေးပါ [Zawgyi] အခုခေတ်လူငယ်အများစုနဲ့တွေ့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် မကြာခဏအကြားရဆုံးစကားတစ်ခွန်းကို ပြောပါဆိုရင် “အလုပ်ရှာပေးပါ” ဆိုတာပါပဲ။ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရင်းနှီးတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အကြီးအ… Discussion အလုပ်ရှာပေးပါ 13 Likes
ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဘယ်လိုပြောမလဲ [Zawgyi]“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” “ကျေးဇူးပြုပြီးတော့”ဆိုတဲ့ စကားတွေက ဘာသာစကားတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့မှုကို စကားအရာမှာလည်းဖေါ်ပြကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နေ့စဉ်သုံး ပြောစကားတွေမှာ မပါ မပြီးသလောက်ပါဘဲ။ အင်္ဂ… Discussion ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဘယ်လိုပြောမလဲ 74 Likes
လက်ကိုင်ဖုန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် (Mobile Phone E… [ Zawgyi ] Mobile Phone ဆိုတဲ့ ဒီမရှိမဖြစ်တဲ့ကိရိယာလေးကြောင့် တပါးသူကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ နည်းတွေကတော့ အများကြီးပါ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ဒီအသုံးဝင်တဲ့ ကိရိယာလေးဟာ သင်နဲ့ ခါးမှာ ဆက်ထားတာ မဟုတ်ဘ… Discussion လက်ကိုင်ဖုန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် (Mobile Phone E… 21 Likes ပြန်စာတကယ်ရရှိနိုင်မဲ့ e-mail ရေးနိုင်ရန် အြ… လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီကို email ပို့ပြီးတော့ သူတို့ဆီက ပြန်စာဘယ်သောအခါမှလာမှာလဲ၊ ပြန်တောင်လာပါ့မလားဆို တာကို မသိပဲနဲ့ ထိုင်စောင့်နေရတာလောက် စိတ်တိုစရာကောင်းတာ မရှိပါ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ေ… Discussion ပြန်စာတကယ်ရရှိနိုင်မဲ့ e-mail ရေးနိုင်ရန် အြ… 24 Likes အစားအစာ စားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော စကားအသုံးအနှုန… [Zawgyi] ယနေ့သင်ခန်းစာမှာ<a href="http://macmillandictionaryblog.com">http://macmillandictionaryblog.com</a> မှ Kerstin Johnson ရဲ့ အစားအစာစားတာတွေ နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ပြောဆိုသုံးစွဲတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုံးတွေကို ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် နံနက်စာ/ေ… Discussion အစားအစာ စားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော စကားအသုံးအနှုန… 22 Likes အပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းကို ယဉ်ကျေးစွာ အဆုံးသ… &lt;Zawgyi version&gt;လူတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောနေရာမှ ကိုယ့်ဖက်မှပြောတာကို စကားစဖြတ် အဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတာ တခါတလေ တော်တော်လေးခက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်ဖက်လူက ကိုယ့်ရဲ့ စကားဖြတ… Discussion အပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းကို ယဉ်ကျေးစွာ အဆုံးသ… 40 Likes အခြေခံအင်္ဂလိပ်အသုံး (၂၀) အခြေခံအင်္ဂလိပ်အသုံး ၂၀ ၆၁။ before (adverb ကြိယာဝိသေသန) မတိုင်မီက။ ယခင်က။ အရင်က။ ၁။ before အား ယခုအချိန်မတိုင်ခင် မည်သည့်အချိန် ‘at any time before now’ ကိုမဆိုရည်ညွှန်းရန်သုံးနိုင်သည်။ ၄င်းအား presen… Discussion အခြေခံအင်္ဂလိပ်အသုံး (၂၀) 11 Likes
အသုံးများသော အီဒီယမ် (၁၀) ခု မကြာသေးမီက ချစ်သူနှင့် အဆက်ဖြတ်ခဲ့ပြီး စိတ်ညစ်နေတဲ့အကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်စကားကို အမိဘာသာစကားအဖြစ် ပြောသော သင့်သူငယ်ချင်းနဲ့ပြောနေရင်းမှ သူက ရုတ်တရက် သင့်ဘက်လှည့်ပြီး "စိတ်မပူပါနဲ့ကွာ၊ သူ့လိုမျိုးမိန်းကေ… Discussion အသုံးများသော အီဒီယမ် (၁၀) ခု 41 Likes
Talking to strangers (သူစိမ်းတို့နှင့်စကာြးေ… [Zawgyi] နိုင်ငံခြားသားများနှင့်ဖြစ်စေ၊ မိမိမသိသူမျက်နှာစိမ်းများနှင့် ဖြစ်စေ တွေ့ဆုံပြောရမည့်အခြေအနေ တွေအများကြီးရှိပါသည်။ ဘတ်စ်ကားစောင့်နေစဉ်၊ တန်းစီနေစဉ် လူစိမ်းတို့နှင့်စကားပြောဖြစ်တတ်ကြသည်။ ကူး… Discussion Talking to strangers (သူစိမ်းတို့နှင့်စကာြးေ… 72 Likes "မသိဘူး" ဟုပြောသောအခါ "I don't know" မှလွဲ၍ေ… [Zawgyi]"မသိဘူး" ဟုပြောသောအခါ "I don't know" ဟုသာအပြောများကြပါသည်။ ဤသင်ခန်းစာတွင် အခြား အလဲအလှယ်အသုံးပြုနိုင်သည့် အသုံးအနှုန်းများကို ဥပမာများဖြင့်ရှင်းပြထားပါသည်။ ယမန်နေ့မှ တင်ပေးလိုက်သော သင်ခန်းစာကဲ… Discussion "မသိဘူး" ဟုပြောသောအခါ "I don't know" မှလွဲ၍ေ… 74 Likes
လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတည်ပြုခြင်း [Zawgyi] လေယာဉ်နဲ့ ခရီးသွားတဲ့အခါ မိမိနိုင်ငံမှာဘဲ ခရီးသွားကုမ္ပဏီကို တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ လက်မှတ်ဝယ်ရ ပါမယ်။ အဲဒီအပိုင်းကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ ပြောနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ထည့်မရေးတော့ပါဘူး။ အ… Discussion လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတည်ပြုခြင်း 22 Likes ပြောနည်း၁၀၀ အခန့်သုံး/အရပ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြေ… 97. THANK PEOPLE FOR COMING အခမ်းအနားလာပရိတ်သတ်အားကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်း Thank you for Thank you for coming. အခုလိုတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ It’s beenapleasure It’s beenapleasure to… Discussion ပြောနည်း၁၀၀ အခန့်သုံး/အရပ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြေ… 19 Likes သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ (၂၂) ALWAYS အမြဲ၊ အမြဲတစေ၊ အမြဲတမ်း ၁။ when someone always does something or something always happens အမြဲတမ်းလုပ်သည့်အခါ၊ အမြဲတမ်းဖြစ်သည့်အခါ Always (adv) အမြဲတမ်း၊ ဘယ်အချိန်မဆို She was always re… Discussion သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ (၂၂) 16 Likes စကားတစ်လုံး အသုံးများစွာ (၂) ဘာသာစကား လေ့လာတဲ့အခါ စကားလုံးတွေဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်တူပေမယ့် အသုံးအနှုန်းမတူတာတွေ၊ စကားလုံးတူပေမယ့် အဓိပ္ပယ်မတူတာတွေ စသည့်အချက်တွေကို ဘာသာစကား လေ့လာသူတိုင်း မလွဲမသွေ တွေ့ကြုံကြရမှာပါ။ ဥပမာ… Discussion စကားတစ်လုံး အသုံးများစွာ (၂) 24 Likes စကားတစ်လုံး အသုံးများစွာ ဘာသာစကား လေ့လာတဲ့အခါ စကားလုံးတွေဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်တူပေမယ့် အသုံးအနှုန်းမတူတာတွေ၊ စကားလုံးတူပေမယ့် အဓိပ္ပယ်မတူတာတွေ စသည့်အချက်တွေကို ဘာသာစကား လေ့လာသူတိုင်း မလွဲမသွေ တွေ့ကြုံကြရမှာပါ။ ဥပမာ -… Discussion စကားတစ်လုံး အသုံးများစွာ 25 Likes House & Home (Vocabulary Lesson) အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတဲ့အခါ ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝမှသာ ပြောချင်တဲ့စကားကို ထိထိရောက်ရောက် တစ်ဖက်သား နားလည်အောင် ပြောဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝဖို့ အတွက် Listening, Reading တွေက တဆင့် စကားလုံးအသ… Discussion House & Home (Vocabulary Lesson) 38 Likes Say, Tell, Speak & Talk အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာတဲ့အခါ စကားလုံး အသုံးအနှုန်း (usage) ဟာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပါ၊ စကားလုံး အဓိပ္ပာယ်ခြင်း တူညီပေမယ့် သုံးနှုန်းတဲ့ နေရာမတူညီကြပါဘူး။ မိခင်ဘာသာ စကား ဖြစ်တဲ့ မြန်မာမှာလည်း အလားတူ… Discussion Say, Tell, Speak & Talk 44 Likes LIBRARY TALK - “What doesa‘responsible bus… “What doesa‘responsible business’ look like?” by VICKY BOWMAN Nowadays topics like transparency, the UN Global Compact, corporate social responsibility (CSR), sustainability and business ethic… Discussion LIBRARY TALK - “What doesa‘responsible bus…9Likes သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ (၂၁) ALONE တစ်ဦးတည်း၊ တစ်ယောက်တည်း၊ ၁။ when there are no other people with you မိမိနှင့်အတူအခြားသူများရှိမနေသည့်အခါ Alone/ on your own/ by yourself တစ်ဦးတည်း၊ မိမိဘာသာ၊ တစ်ကိုယ်တည်း တစ်နေရာတွင် အခြားသူမျာ… Discussion သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ (၂၁) 15 Likes
Because နှင့် Because of ကို အစားထိုးအသုံးပြ… [Zawgyi] အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းပြောကြားလိုလျှင် စာလုံးများနှင့် စကားစုများကို အသုံးပြု၍ အကြောင်းပြပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ လူသုံးများသော စကားလုံးများမှာ "because" သို့မဟုတ် "because of" တို့ ဖြစ်ပါသေ… Discussion Because နှင့် Because of ကို အစားထိုးအသုံးပြ… 32 Likes Talking about likes and dislikes [ Zawgyi ] One man's meat is another man's poison. လူတစ်ယောက်နှစ်သက်ရာသည်အခြား တစ်ယောက်အတွက် မနှစ်မြို့ရာဖြစ်တတ်သည်။ ကိုယ်ကြိုက်တာ သူကြိုက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်၍မရ။ ကိုယ်ကြိုက်တာ သူမကြိုက်ရကောင်းလား… Discussion Talking about likes and dislikes 33 Likes